Iji GIS ịchịkwa ma gbochie ọrịa dengue
N'ebe anyị nọ na Mesoamerican na ebe ụwa na-ekpo ọkụ n'ozuzu ya, Dengue bụ ọrịa nkịtị na ọnwa nke oge udu mmiri. Knowingmara ebe ọnụọgụgụ kachasị nke na-eme bụ n'ezie mmega ahụ nke ngwa GIS na-enye nsonaazụ bara uru. Echetara m mgbe m bụ nwata, dengue abụghị ...
Site na ndị okike nke ụdị SuperGIS anyị na-enweta ụfọdụ ozi ọma bara uru ịnapụta.Fujairah Ngalaba nke Ọha na Ọha na Udo Mee ka nkwado nke akụrụngwa dị na SuperGIS mezie nkwado nke Fujairah bụ otu n'ime United Arab Emirates, na Middle East. Ha ekpebiela itinye teknụzụ SuperGIS maka njikwa nke usoro ndụ akụrụngwa, ...
SuperGIS, echiche mbu
N'ebe ọdịda anyanwụ anyị, SuperGIS enwetabeghị ọkwa dị mkpa, agbanyeghị na ọwụwa anyanwụ, na-ekwu maka mba ndị dịka India, China, Taiwan, Singapoore - ịkpọ aha ole na ole- SuperGIS nwere ọnọdụ na-adọrọ mmasị. Enweela m iji nwalee ngwaọrụ ndị a n'oge 2013 dịka m mere gvSIG na Manifold GIS; na-atụle ọrụ ya; maka ugbu a…
Geospatial - GIS, mbụ echiche, SuperGIS